UJulie Kelly Archives - US Right to Know
Ukudlondlobala Kwama-Anti-Women, AmaQembu EzeMpilo Aphikisana Nomphakathi
Posted on November 30, 2017 by UStacy Malkan
Isithombe © Tony Powell. IGala Lesigungu Sabesifazane Esizimele sango-2017. Isiteshi seNyunyana. Novemba 15, 2017
Le ndatshana yavela okokuqala Huffington Post.
Esikhathini esidlule soiree e-Union Station, i-DC power elite ihlangane embuthanweni wezempilo omelene nomphakathi ovunule njengombungazo wabesifazane okufanele uthinte noma ngubani okhathalele impilo namalungelo abesifazane nezingane.
Isithangami Esizimele Sabesifazane sidwebe i- uhlu oluhlaba umxhwele osopolitiki beRiphabhulikhi eya kugal yalo yonyaka uxhaswe ngu, phakathi kokunye, i-American Chemistry Council, inkampani kagwayi uPhillip Morris, iqembu lokuhweba embonini yezimonyo, iGoogle kanye nephiko langakwesokudla leAmerican Legislative Exchange Council.
Izikhulumi zifaka uSomlomo weNdlu uPaul Ryan kanye nomeluleki weTrump uKellyanne Conway, onqobe i-IWF Umklomelo We-Valor ngokuba “ngummeli oshisekayo kahulumeni onomkhawulo” ongayamukeli “umqondo wokuthi ukuba ngowesifazane kungukukhubazeka.” IConway futhi iyilungu lebhodi le-IWF.
Manje siyini Isithangami Esizimele Sabesifazane?
IWF yaqala eminyakeni engama-25 edlule njenge- umzamo wokuvikela manje-iNkantolo Ephakeme iJaji uClarence Thomas njengoba ayebhekene namacala okuhlukumeza ngokocansi. Leli qembu selivele kukhuliswe izigidi kusukela ezisekelweni eziyimfihlo zabazalwane bakaKoch nakwabanye ozigidigidi abangamaphiko okudla ukuze bafeze umsebenzi wabo "wokwandisa isibalo sabesifazane abazisa izimakethe zamahhala nenkululeko yomuntu siqu."
Emhlabeni we-IWF - iqembu uJoan Walsh elichazwe ku- The Nation “njengabafazi 'abenza umsebenzi ongcolile kaKoch” - lokho kusho ukuvikela inkululeko yezinkampani yokuthengisa imikhiqizo enobuthi kanye nokungcolisa imvelo, ngenkathi izama ukuhlela leyo ajenda njengefanele abesifazane nezingane.
Ugwayi we-E kufanele uvunyelwe ngenxa ye- izidingo zebhayoloji ezihlukile kwabesifazane, isibonelo, kanye nemfundo yesayensi yezulu yi wethusa kakhulu eyabafundi. (Incwadi e-cig ithi “uPhillip Morris PR ojwayelekile,” uthi Isazi semboni kagwayi uStan Glanz; kanye neGreenpeace ihlukanisa IWF "njengeqembu eliphambili lokuphika isimo sezulu seKoch Industries.")
Abesifazane bangazuza futhi ngokunganaki ukukhathazeka kwe- "alarmist" ngamakhemikhali anobuthi, ngokusho kochungechunge lwezifundo lwe-IWF exhaswe nguMonsanto.
Ukukunika umuzwa wokuthumela imiyalezo kumakhemikhali: Omama abaphikelela ekudleni okungokwemvelo bayazikhukhumeza, bathanda "abazali bezindiza ezinophephela emhlane" abadinga ukulawula konke uma kuziwa ezinganeni zabo, noma indlela ukudla okulinywa nokuphathwa ngayo, ”Ngokusho kukaJulie Gunlock, umqondisi wephrojekthi ye-IWF ye-“ Culture of Alarmism ”, njengoba kucashunwe ku esihlokweni enesihloko esithi "Ubushiqela be-organic mommy mafia" obabhalwa ngumuntu we-IWF.
E-gala ye-IWF, uGunlock uthathe isithombe nge-Monsanto isisebenzi sika-Aimee Hood noJulie Kelly, obhala izindatshana ezifaka ukungabaza ngobungozi besayensi yezulu kanye ne-pesticide, wake wabizwa ngisho iqhawe lesimo sezulu uBill McKibben "ucezwana".
UGunlock noKelly “bangosaziwayo bamatshe,” UHood ubhale kuTwitter.
"Ngikubiyela lokhu," kusho isisebenzi seMonsanto uCami Ryan.
Beka uhlaka kuyo yonke i-shindig bese ubona ubuphukuphuku bezombusazwe ezithwetshulwe ezinkampanini eMelika, lapho abaholi bezinqubomgomo bamukela obala iqembu labesifazane elilwa nabesifazane elilinganisa "inkululeko" nokudla izibulala-zinambuzane ezinobuthi, emcimbini oxhaswe imboni yamakhemikhali , inkampani kagwayi, iqembu eleqisayo elifuna susa iSenethi ekhethwe ngokuvota kanye nomthombo wezindaba onethonya elikhulu emhlabeni.
Okwamanje emhlabeni onengqondo
Isayensi yakamuva ikhombisa ukuthi uma ufuna ukukhulelwa futhi ukhulise izingane ezinempilo, kufanele wenqabe inkulumo-ze yokuthi amaqembu afana ne-Independent Women Forum azama ukuthengisa.
Emasontweni ambalwa edlule, i-Journals of the American Medical Association ishicilele i- Ucwaningo lweHarvard okufaka ukudla okuphethwe zinambuzane ezinkingeni zokuzala, a Ucwaningo lwe-UC San Diego kubhalwa ukwanda okukhulu kokuchayeka komuntu kumuthi wokubulala izinambuzane ojwayelekile, kanye nakudokotela ukuhlaziya ukunxusa abantu ukuthi badle ukudla okungokwemvelo.
Ngibhale ngalezo zifundo ngokuningiliziwe lapha, "Uzama ukukhulelwa? Isayensi iphakamisa ukuthi: yidla okuphilayo futhi ulawule imboni yokubulala izinambuzane".
Amaqembu amakhulu abelokhu enikeza izeluleko ezifanayo iminyaka.
Ngo-2012, i-American Academy of Pediatrics Kunconywa ukunciphisa ukutholakala kwezingane emithini yokubulala izinambuzane ngenxa ye- izincwadi ezikhulayo exhumanisa izibulala-zinambuzane nezinkinga zempilo ezingapheli ezinganeni, kufaka phakathi izinkinga zokuziphatha, ukukhubazeka kokuzalwa, isifuba somoya kanye nomdlavuza.
Ngo-2009, i-bipartisan Iphaneli Likamdlavuza likaMongameli wabika: “umthwalo weqiniso womdlavuza obangelwa imvelo uye wabukelwa phansi kakhulu.”
Iphaneli linxuse owayenguMongameli wangaleso sikhathi uGeorge W. Bush “kakhulu ukuthi asebenzise amandla ehhovisi lakho ukususa izidalwa zomzimba nezinye izinto ezinobuthi ekudleni kwethu, emanzini nasemoyeni ezikhuphula ngokungadingekile izindleko zokunakekelwa kwempilo, zikhubaze umkhiqizo weSizwe sethu, futhi zichithe izwe laseMelika uyaphila. ”
Ngeshwa esizweni sakithi, ukwenza ngokuvumelana naleso seluleko akukwazanga ohlelweni lwezepolitiki olubhekiswe kuzintshisekelo zebhizinisi.
Ukubanjwa kwezempilo kwezesayensi
Sekungamashumi eminyaka, izinkampani zokubulala izinambuzane zisebenzisa isayensi nezinhlangano ezilawula i-US ukugcina iqiniso lifihliwe ngobungozi bezempilo bamakhemikhali abo.
Imininingwane yembulwa ngamakhulu ezinkulungwane zamakhasi we imibhalo yemboniwakhululwa zomthetho Ukutholakala, abamemeza futhi Izicelo ze-FOIA ezihlolwe ku- ukulalelwa kukahulumeni futhi by abaningi abezindaba Izitolo.
Ukuze uthole amazwibela omkhankaso weMonsanto “wokusebenza isikhathi eside oyimfihlo wokuqopha irekhodi lesayensi, ukuthonya umbono womphakathi, kanye nokuthonya ukuhlolwa kokulawulwa” ku-herbicide glyphosate, bheka le ndatshana yomuntu engisebenza naye uCarey Gillam ku Umagazini i-Undark.
Njengesibonelo esisodwa sombumbano lukahulumeni / lwenkampani: ngo-2015, ewashini labaphathi baka-Obama, isikhulu se-EPA esasiphethe ukuhlola ingozi yomdlavuza we-glyphosate okuthiwa saziqhayisa kumphathi weMonsanto ngokusiza “ukubulala” isifundo somdlavuza wenye inhlangano, njengoba I-Bloomberg ibike.
Ukucindezela isayensi kube yiphrojekthi ekabili, yamashumi eminyaka. Kusukela ngo-1973, uMonsanto wethule isayensi engabazisayo ukufuna ukuphepha kwe-glyphosate ngenkathi i-EPA ibheke kakhulu, njengoba uValerie Brown no-Elizabeth Grossman babhalela Kulezi zikhathi.
UBrown noGrossman bachitha iminyaka emibili behlola ingobo yomlando etholakala esidlangalaleni yemibhalo ye-EPA kwi-glyphosate, futhi babika:
“IGlyphosate yicala elicacile 'lokuthwalwa ngokomthetho' kwenhlangano esebenza ngenhloso yayo yezezimali ngenkathi imibuzo ebucayi ngempilo yomphakathi isalokhu isezindongeni. Irekhodi lisikisela ukuthi eminyakeni engama-44 — ngokusebenzisa abaphathi bomongameli abayisishiyagalombili — abaphathi be-EPA abakaze bazame ukulungisa le nkinga. Ngempela, imboni yezibulala-zinambuzane ithinta ubuchwepheshe bayo obubheke phambili, besimanje njengoba izama ukugcina ucwaningo lwayo ekhabetheni, futhi ithembele emicabangweni engabazekayo nasezindleleni eseziphelelwe yisikhathi kwezobuthi obulawulayo. ”
Babhala ukuthi okuwukuphela kwendlela yokuthola isisekelo sesayensi sokuhlola ukuphepha kwe-glyphosate, “ukuphoqa ukukhanya kwasemini phakathi kwabalawuli nabalawulwa.”
Uhulumeni olinganiselwe usho inkululeko yokulimaza
EWashington kaTrump, akukho ukukhanya kwemini nhlobo phakathi kwezinkampani ezithengisa imikhiqizo eyingozi nezinhlangano okufanele zizilawule.
Umphathi we-EPA uScott Pruitt ukuxosha ososayensi emabhodini ezeluleko nokufaka i-EPA nge abaqokelwe ezombusazwe exhunywe ezimbonini zikawoyela, zamalahle nezamakhemikhali, eziningi zazo ezixhumene nabaphiki besayensi yesimo sezulu.
Njengomunye wakhe Izenzo zokuqala ezisemthethweni, UPruitt waphonsa eceleni izincomo zososayensi be-EPA futhi wavumela iDow Chemical ukuthi iqhubeke nokuthengisa isibulala-zinambuzane esenziwe njengegesi yezinzwa exhumene nokulimala kwengqondo ezinganeni.
"Ifa likaTrump elihlala njalo kungaba umdlavuza, ukungabi nenzalo kanye nama-IQ anciphile emashumini eminyaka ezayo."
"Izingane zitshelwa ukuthi zidle izithelo nemifino, kodwa ososayensi be-EPA bathole amazinga alesi sibulala-zinambuzane ekudleni okunjalo kuze kube izikhathi eziyi-140 imikhawulo ethathwa njengephephile," kubhala uNicholas Kristof ebabaza. I-NYT ivuliwe. "Ifa likaTrump elihlala njalo kungaba umdlavuza, ukungabi nenzalo kanye nama-IQ anciphile emashumini eminyaka ezayo."
U-Pruitt useze wafaka ne-lobbyist yezimboni zamakhemikhali ophethe i- umthetho omusha oshubile wobuthi obekufanele ulawule imboni yamakhemikhali.
Kubi kakhulu - kodwa-ke, sekuyisikhathi eside kakhulu.
Lowo mthetho omusha oshubile we-toxics, owaphasiswa ngonyaka owedlule ku- isichotho senkazimulo eyizinhlangothi ezimbili, kwaba iphikiswa ngu amaqembu amaningi ezemvelo kodwa kudunyiswa ngu - futhi kubikwa ebhalwe ngu - Umkhandlu waseMelika Chemistry.
“Imboni yamakhemikhali eyizigidi ezingama- $ 800 ifaka imali kosopolitiki futhi inxenxa indlela yokuphuma emithethweni esebenzayo. Lokhu bekulokhu kuyinkinga, kepha manje abaphathi bakaTrump sebehambe baze bakhetha abasebenza embonini yamakhemikhali ukuthi babheke ukuvikelwa kwemvelo, ”njengoba kuchazwe uKristof.
“I-American Academy of Pediatrics iphikisane nesinqumo sabaphathi mayelana nesibulala-zinambuzane segesi yezinzwa, kodwa izikhulu zasekela imboni ngodokotela. Ixhaphozi lawina. Indawo yokwamukela izimboni zamakhemikhali, i-American Chemistry Council, inguqulo yanamuhla kaGwayi Omkhulu… ”
"Ngelinye ilanga sizobheka emuva sizibuze: Besicabangani ?!"
Isimilo Sezwe Lethu
Eminyakeni eyishumi eyedlule, i-Independent Women's Forum yethule i-Valor Award kuNancy Brinker, umsunguli weSusan G. Komen for the Cure, okuyinhlangano enkulu kunazo zonke ezweni yomdlavuza webele - iqembu elibuye lagxekwa ngokuthatha imali ku izinkampani ezingcolisa kanye nokukhuthaza ukudla okungenampilo futhi imikhiqizo enobuthi.
Emhlanganweni we-IWF ka-2007, enkulumweni yokwamukela wabiza “Isimilo Sezwe Lethu, ”Kusho uBrinker waxwayisa ngokuthi kuzolahleka izimpilo zabantu ngaphandle kokuthi iMelika ithathe isinyathelo sokugwema“ i-tsunami yomdlavuza ”ezayo.
Kodwa-ke, uthe: “Bangane bami, lokhu akuyona inkinga yezepolitiki. Uma kukhulunywa ngomdlavuza, awekho amaRiphabhulikhi noma amaDemokhrasi, akukho nkululeko noma abagcinwayo. ”
Esikhundleni salokho, uthe ukucela ukungacaci njengoba ayemi phambi kweqembu elitshela abesifazane ukuthi bangakhathazeki ngemithi yokubulala izinambuzane, emcimbini onemali ethe xaxa ezinkampanini, ukushaya umdlavuza kuyindaba yokubiza intando yokwenza umdlavuza ube “yinto ephambili ezweni lonke nasemhlabeni wonke!”
Kepha leyo impela iyinkinga yezepolitiki. Imayelana namaRephabliki namaDemokhrasi, bobabili abadumaze abaseMelika ngokwehluleka ukubhekana nemboni yamakhemikhali. Imayelana nokubiza intando yezepolitiki yokuthola amakhemikhali axhumene nomdlavuza, ukungabi nenzalo nokulimala kobuchopho emakethe nangaphandle kokudla kwethu.
Okwamanje, singathatha izeluleko zesayensi: sidle okuphilayo bese sivotela osopolitiki abazimisele ukumelana nomkhakha wezibulala-zinambuzane.
Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane I-Aimee Hood, I-ALEC, I-American Chemistry Council, Umkhandlu Wokushintshana Kwezomthetho WaseMelika, UBill McKibben, UCami Ryan, isimo sezulu, IDow Chemical, -Google, Inkundla Yabesifazane Ezimele, IMF, UJulie Gunlock, UJulie Kelly, Kellyanne Conway, I-Koch, Monsanto, UNancy Brinker, UPaul Ryan, Phillip Morris, Scott Pruitt, USusan G. Komen for the Cure, trump